Antigua neBarbuda Citizenship yeRendezvous Bay Mugove
Kutengeswa kwemugove weiyo yakaoma yekuwana Citizenship yeAntigua neBarbuda
Chikwata cheRendezvous Bay chiri kushanda pamwe newe kuti uvake imba yako yakasarudzika yechitsuwa mune imwe yemapaki emunyika akanaka kwazvo pasi rese.
Iyo Rendezvous Bay dhizaini mitemo yakagadzirirwa kugadzirisa zvivakwa zvinosanganisa zvakasikwa nenzvimbo yekuvaka. Maonero anofema nemhepo dzinopisa dzinoratidzira nzvimbo dzekugara dzekunze, nepo runyoro ruripo rwakareruka, organic, nzvimbo dzisingagumi.
Iine hushoma hwechivako chivakwa cheumbozha hwekuvanzika, imba yega yega muRendezvous Bay ichave yayo yega yekuvanda. Dhizaini mitemo inoda nzvimbo dzakaputswa uye inovakwa yekuvaka dzimba inochengetedza mhuri neshamwari kugamuchirwa, pamwe nekupa zororo uye pekugara mukati mega chivakwa.
Mutengi wemba anogona kushandisa imwe yeRendezvous Bay's dhizaini dhizaini, kugadzira yakasarudzika vhezheni, kana kugadzira yavo imba, vachishanda zvakanangana neRendezvous Bay's pachavo mapurani kana neyakavakirwa sarudzo. Mapurojekiti anofanirwa kuteedzera kwese kutungamira uye dhizaini yechitsuwa ichi sezvakarongwa muRendezvous Dhizaini Yekutonga Mitemo uye inogamuchirwa neChirongwa Chekuongorora Chikwata. Iwe unogona kushanda pamwe nevemuno kana epasirese vagadziri vemukati vewaunosarudza. Tinogona kubatsira nekuumbwa kwechikwata chako chekugadzira uye tichashanda padhuze navo pane yako imba.
Yenharaunda Association Chinyorwa
Nharaunda yeRendezvous Bay ichatongwa nemitemo inonzi Community Association Bylaws uye kuburikidza neCommunity Association Board of Directors, iyo inomiririra vanobata munharaunda. Iri gwaro rakadzama rinosanganisira dhizaini dhizaini, chimiro uye manejimendi, dhizaini dhizaini, kuvaka uye kushandiswa kwemigwagwa, mari zhinji, uye Ruzivo rweVaridzi Veimba.
Maonero anofema nemhepo dzinopisa dzinoratidzira nzvimbo dzekugara dzekunze, nepo runyararo ruripo rwakareruka, organic, nzvimbo dzisingagumi.
Rendezvous Bay yekuvaka timu ichave nebasa rekutakura imba yega yega. Nevashandi vebhajeti, timu ichashanda yakanangana nemutengi kana nyanzvi yakasarudzwa kuburikidza nehurongwa hwekugadzira kuti vagadzire yekupedzisira imba yekuvaka chirongwa.
Chikwata cheRendezvous Bay chichaona zvese kuvaka pamwe nemakondirakiti emuno pamakwikwi uye ichapa kuvimbisa kumutengi. Zvemutemo uye zvemukati dhizaini dhizaini inogona zvakare kupihwa neveRendezvous Bay vashandi, kana, sekugadzirwa kwemba, timu inogona kushanda pamwe neakasarudzika-vechitatu-bato nyanzvi kune aya masevhisi kuendesa yakapedzwa uye yakarongedzwa imba kune wega mutengi.